Covid-19 – Tsy fanarahan-dalàna: saofera sy resevera 70 mahery naiditra “violon” | NewsMada
Niverina nampihatra ny lalàna amin’ireo tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana, noho izao fihanaky ny valanaretina coronavirus izao ny mpitandro filaminana. Omaly maraina fotsiny, taxibe 28 no nampidirina ”fourrière”. Saofera sy resevera miisa 70 mahery kosa no naiditra ”violon”.
Misy amin’ireo fiara ireo no tratra nampiasa seza “strapotin” afovoany sady manao taingimbe, ao koa ny mitondra mpandeha tsy manao arovava sy tsy nampiasa “égel désinfectant”. Nalefa am-balam-pamonjana “fourrière” avy hatrany ireo taxi-be tratra nanao fandikan-dalàna ireo. Miisa 70 mahery kosa ireo mpamily taxi-be sy resevera nampidirina violon noho ny tsy fanarahana ny fepetra napetraky ny fanjakana manoloana izao ady amin’ny fihanaky ny coronavirus izao. “Tsy ny mpandeha an-tongotra irery ihany no mahazo sazy fa hatramin’ireo fiara iombonana, arahin’ny mpitandro filaminana maso akaiky ihany koa noho izy ireo mitatitra vahoaka ka manamora ny fiparitahan’ny valanaretina covid-19”, hoy ny teo anivon’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena. Manamafy hatrany ny polisim-pirenena fa mila mifehy tena ny tsirairay manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina ka aoka samy ho tompon’andraikitra ary hiaro ny tenany mba ho fiarovana ny hafa ihany koa.
173 nosaziana nanadio lalana…
Fa olona 75 hafa koa tratra tsy nanara-dalàna sy/na tsy nankatoa ny fepetra rehetra napetraky ny fitondram-panjakana teny amin’iny faritra Ambohitrimanjaka sy Andoharanofotsy iny. Miisa 34 ireo tsy nitondra aroavava mihitsy raha 29 nitondra fa natao tany am-paosy fa tsy nanaovana. Olona valo tratra nanao taingimbe tao anaty fiarakely ka tsy voahaja ny fepetra elanelana iray metratra. Roa nitondra moto sady tsy nanao arovava no tsy nanao aroloha, iray hafa nanao fanamiana miaramila notapahana. Mitohy ihany koa ny fanaraha-masao ataon’ny police militaire, araka ny fanazavana voaray. “Mihatra avy hatrany ny fanasaziana satria efa tapitra ny fotoana fanentanana sy fampitandremana. Hatreto aloha, mbola asa fanadiovana iarahana ho soa an’ny daholobe no sazy omena, saingy ho henjana kokoa izany, arakaraka ny tranga misy eo. Aoka hifampiteny isika, raha misy mafy sofina dia antsoy ny mpitandro filaminana akaiky anao indrindra fa horaisina ny fepetra sahaza azy”, hoy kosa ny fanazavan’ny zandary.
Raha ny antontanisa farany nomen’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, miisa 173 ireo olona teto Antananarivo sy ny manodidina tsy nanaraka ny fepetra. Nampanaovina asa ho tombontsoan’ny daholobe ireto olona tratra ireto. Olona iray hafa kosa nanohitra tsy nanaiky izany, raha ny fanazavan’ny zandary hatrany.
Nanatanteraka fitsirihana ireo sakana fitiliana ny fahasalaman’ireo olona eny amin’ny lalam-pirenena ireo tompon’andraikitry ny filaminana isan’ambaratongany, omaly. Nahitana ny avy amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka ary ny Seg. Teny Ampitatafika sy Ambatomirahavavy no nandehanan’izy ireo. Fotoana nahafahan’izy ireo nahita ifotony ny zava-nisy teny an-toerana. Miisa 12 ireo taxi-be tsy nanaja ny fepetra ka naiditra “fourrière” raha notazonina kosa ny mpamily.